Hichapụ Airpods n'akwụkwọ ozi ahụ na ndị Magi n'ihi na ha agaghị adị ruo mgbe Christmas | Akụkọ akụrụngwa
Ikpeazụ nke ọnwa Septemba Apple gosipụtara iPhone 7 ọhụrụ, ma nyekwa anyị ihe ngwọta na-adọrọ mmasị maka mkpochapụ jack jackphone. Na Ụgbọelu ma ọ bụ ihe bụ otu ihe a wireless ekweisi, ọ dịghị onye nwe otu nke ọhụrụ mobile ngwaọrụ ga-atụ uche 3.5 mm njikọ.
O di nwute, ibido ngwa ngwa ohuru a abughi oge, ma n’agbanyeghi na o yiri ka igba egbe a gha eme n’otu oge na iPhone 7, nke a abughi ikpe. Ọtụtụ n'ime anyị tụrụ anya ya maka ekeresimesi ma anyị etinyeworị ya n'akwụkwọ ozi anyị degaara Ndị Eze Atọ ahụ, mana Ihe niile na-egosi na ha agaghị abata n'ahịa ahụ ruo mgbe Krismas gasịrị.
N'oge a anyị enweghị ụbọchị ọrụ maka ọbịbịa ya n'ahịa ma ọ dị ka na Cupertino ha anaghị enwe Airpods njikere, ha ga-anọgide na-agbagharị nsogbu dị iche iche, nke ikpeazụ metụtara njikọta. N'adịghị ka ekweisi ikuku dị ka ndị anyị nwere ike ịzụta taa n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa ọ bụla, Apple bụ ngwaọrụ abụọ nwere onwe ha, nke ga-ejikọ n'otu oge.
Obere oge anyị ahụla ka ngwaahịa Apple ọ bụla nwetara igbu oge na mbido ya, mana Airpods na-egbu oge niile, ọ bụ ezie na anyị nwere olile anya na n'ikpeazụ mgbe ekeresimesi gasị, anyị ga-ahụ ngwa ọhụrụ dị na ahịa ma dị maka ịzụta.
Ọ dị gị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya nnukwu oge nke Apple's Airpods na-agbakọta na mbata ha na ahịa?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Hichapụ Airpods n'akwụkwọ ozi ahụ na ndị Magi n'ihi na ha agaghị adị ruo mgbe Krismas gachara